> Resource > Talooyin > Wedding sawrirrada Fikradaha - Samee Wedding a Photo Album for Your Wedding
Maalin Wedding waa maalinta ugu gaarka ah ee xusuus uu nool yahay labada aroosadda oo aroos ah. Samaynta sawrirrada digital arooska dib u nooleeyaan faahfaahsan arooska kasta oo ku qarisaan naftiina weligeed arooska xusuus waa wax loo baahan yahay.
Dhaqan ahaan, dadka farsameeyaan scrapbooking arooska, iyadoo la isticmaalayo daabacay sawiro, warqad, embellishments iyo xabagta. Laakiin hadda, ay sabab u tahay jiritaanka ee camera digital, dadka intooda badan ay qaataan photos, badbaadin iyo sawiro digital wadaagaan. Iyadoo la raacayo, samaynta a album sawir arooska waa caanka ah, gaar ahaan gabdhaha la aroosayo inay ka. Iyada oo taageero ka software scrapbooking digital, waa mid fudud oo si sahlan loo sameeyo sawrirrada arooska la arrimo sawrirrada arooska free ah. Guud ahaan, kaliya aad u baahan tahay in ay sii wadaan software-ka, dajiyaan photos iyo qaar ka mid ah ku darto embellishments lagama maarmaan ah oo dheeraad ah, qaar ka mid ah sameeyo naqshado iyo scrapbooking Arooskii waa diyaar in la badbaadiyey sida file image ama si toos ah u daabac.
Fikrado sawrirrada Wedding arooska kaamil ah sameynta sawrirrada
1. Wedding sawrirrada fikradaha: fikrado sawir arooska
Abuuritaanka arooska scrapbooks digital waa mashruuc oo waaweyn. Waxa lagugula talinayaa inaad sawiro ka hor, inta lagu jiro iyo ka dib markii aad arooska. Waxaad ogaan doontaa oo dhan diyaarinta istaahilaan marka aad buuxiso scrapbooking arooska qurux badan. Ka hor inta aadan abuuri karto shakhsi arooska albums sawir digital , ururinno oo dhan arooska sawiro ka saaxiibada iyo qoyska. Markaas sawiro kala qaybi qaybo kala duwan. Waxaad xulan kara arooska sawirka wanaagsan ee ka qayb kasta halka samaynta scrapbooking arooska. Hoos waxaa ku qoran qaybaha sawir soo jeediyay:
• U diyaar garowga Wedding, sida sawiro hawlgelinta, Roob idinkoo Shifaysan, qurxinta ah ee arooska, tababarasho arooska, casho tababarasho, dhar gashiga, martiqaad
• Wedding Maalinta sawirrada: aroosadda, arooska, malxiis, ubaxa Girl, Man Best, Groomsmen, xisbiga iwm
• xaflad aroos
• Reception Wedding
2. sawrirrada Wedding fikradaha: arooska digital Layouts sawrirrada fikradaha
Foomamka scrapbooking Digital iyo Layouts ku siin ah iyo sahlanaanta in ay si deg deg ah loo abuuro arooska sawrirrada digital. Guud ahaan, software scrapbooking digital ku xirato doonaa foom oo lacag la'aan ah sawrirrada iyo Layouts ee munaasabad kasta, oo ay ku jiraan arrimo scrapbooking arooska. In la abuuro arooska scrapbooking digital, aad rabto in aad marka hore dooro template scrapbooking uu jecel yahay digital in qaabka aad jeceshahay ugu. Waa lagama maarmaan, gaar ahaan ka scrapbookers laga bilaabo.
3. sawrirrada Wedding fikradaha: arooska digital soo jeeda sawrirrada
Warqad Background ciyaara pole muhiim ah oo arooska scrapbooking digital. Iyada oo ku saleysan warqad ah asalka xarrago leh, waxaad si fudud u abuuri karaan scrapbooking arooska ee style ah u gaar ah. Haddaba sidaas daraaddeed waxaad u xusuusan kara arooska xaalad kaamil ah. Background marar badan la arrimo scrapbooking digital. Si kastaba ha ahaatee, waad bedeli kartaa in mid aad ugu jeceshahay.
4. Wedding sawrirrada fikradaha: embellishments sawrirrada arooska
Embellishments aad scrapbooking arooska shakhsi iyo iminka. Wax badan oo loo isticmaali karo sida aad arooska scrapbooking embellishments, tusaale ahaan, ubax arooska, qoofalan arooska, confetti, siddo arooska, warqad nidarkiisii, kaarka martiqaad, iyo in ka badan.
Talooyin: Waxaad sidoo kale sameyn kartaa qaar ka mid ah scrapbooks video, kuwaas oo deegaanka u roon iyo lacag. Si aad si sahlan inaad mid, waxaad isticmaali kartaa Wondershare DVD Muqaal dhise .